Kumuu Ahaa Laacibkii Ole Gunnar Solskjaer Uu Barbar-dhigay Micael Carrick Kaddib Ciyaartii Xalay? – Cadalool.com
Kumuu Ahaa Laacibkii Ole Gunnar Solskjaer Uu Barbar-dhigay Micael Carrick Kaddib Ciyaartii Xalay?
February 28, 2019 Abdiwahab A. Abeye
Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa ammaan ballaadhan u jeediyey laacib uu xalay ku tijaabiyey ciyaartii Crysal Palace oo uu kasoo dallacsiiyey heerka labaad.
James Garner oo ay da’diisu tahay 17 jir, waxa uu xalay fursad u helay inuu kooxdiisa Manchester United uu sharafteeda ku difaaco garoonka Selhurst Park isl amarkaana uu guul kula dhamaadaasdo dhamaadkii, balse isaga waxa u dheeraa amaan uga timid tababare Solskjaer oo ku tilmaamay inuu la mid yahay halyeygii kooxda ee haddana tababare-ku-xigeenka ah ee Micael Carrick.
Garner oo ah kabtanka kooxda da’yarta Manchester United ee 18 jirada ayaa waxa lagu beddelay daqiiqaddii 90aad laacibka reer Brazil ee Fred oo isaguba fursad ka helay kulankii xalay kaddib muddo dheer oo uu kaydka ku jiray.
Daqiiqadihii uu garoonka ku jiray, waxa uu Garner sameeyey kubbad-difaacis cajiib ah xilli uu cadaadis saarnaa naadigiisa, waxaana ugu dambayntii uu tababare Solskjaer ku tilmaamay inuu yahay laacibka kooxda u buuxin doona booskii Carrick.
“Wuxuu leeyahay mustaqbal wanaagsan. Wuxuu u ciyaarayaa sidii Michael Carrick. Cadaadis ayay ku noqonaysaa haddii aynu barbar-dhigno Carrick laakiin taasi waa sida uu Manchester United u noqon doono.” Sidaas waxa yidhi tababare Ole Gunnar Solskjaer oo kaddib dhamaadkii ciyaarta la hadlay warbaahinta.
Manchester United oo ay dhaawacyo dibedda ka dhigeen xiddigaha sida Jesse Lingard, Ander Herrera iyo Juan Mata ayaa ku qasbanaatay inay kooxda da’yarta uga yeedhato Garner iyo saaxiibkii Tahith Chong.
Tababare Ole Gunnar Solskjaer oo mar kale ka hadlaya labadan ciyaartoy waxa uu yidhi: “Garner wuxuu la mid yahay Michael Carrick laakiin 20 sannadood ayuu ka yaryahay. Waxaan hubaa inuu wax fiican qaban doono. Sidoo kale Chong wuxuu qabsan doonaa dadka marka uu soo galo. Waa carruur diyaar ah, wayse adag tahay haddii aad tahay difaac inaad fursad hesho adigoo 16 ama 17 jir, laakiin haddii aad tahay weeraryahan waad soo bixi kartaa oo aad naftaada ku sharrixi kartaa fursadda aad hesho, ciyaartana waad ku guuleysan kartaa.”